“Wada Hadaladii Soomaaliya Ma Dawlad Goboleed Ayuu Isku Badalay jamaal cali xuseen | Biyoguurenews.com
Home Wararka “Wada Hadaladii Soomaaliya Ma Dawlad Goboleed Ayuu Isku Badalay jamaal cali xuseen
“Wada Hadaladii Soomaaliya Ma Dawlad Goboleed Ayuu Isku Badalay jamaal cali xuseen
-Siyaasi Jamaal Cali Xuseen ayaa si adag ganafka ugu dhuftay qorshaha ay somaliland doonayso inay kaga qayb gasho caleemo saarka madaxweynaha maamulka Jubboland.
Siyaasi Jamaal Cali Xuseen ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in siyaasad liidata ay tahay in ka qayb galka caleemo saarka madaxweynaha Jubboland lagu sababeeyo mid lagu khilaafyo dawlada federaalka ah ee soomaaliya.
Haddii uu run yahay warkan aan maqlayo ee la leeyahay wafti ayeey Somaliland u diraysa caleemo saarka Jubbaland iyagoo leh waxaanu ku xumeynaynaa dawladda Faderaalka ee Farmaajo hogaaminaayo.
Weligay maan arag siyaasad ka liidata Oo ka Caqli xun tanoo kale. Meel halis ah baa la marayaa iyo tusbax furmay. Haddii arrinkaasi hirgallo waa munaafaqadii Ugu weyneyd ee Ina soo marta halka wiilasha iyo gabdhaha Xamar taga la xidhi jiray Oo aan arrinkana waxba laga qaban. Hadday hirgashana dalkii dawlad goboleed ayuu u xuubsiitay ee yaan cid danbe lala hadlin.
Dal bilaa shacab ah Oo wax walba lagu dayey, wax walbana iska taageeraya. Haddii waftigaasi sidaa sameeyo Oo aanay dawladda Somaliland waxba ka qabanin waxaan u fahmayaa inay la socdaan Fedaraal inaynu ka mid noqana la soo saxeexay. Waxaan sii sawiranayaa iyadoo shirka dhexdiisa laga leeyahay dhamaan dawlad goboleedyadii Somalia Oo dhami waa ka soo qayb galeen Oo xataa Somaliland baa maraysa. Waar Ma anigaa waalan mise Cadan baa laga heesayaa goormaa heerkaa la gaadhay. Oo maxaa loo xidhay Oo loo haystaa dadkan shicibkee Xamar u shaqo tegay? Walaahi meel fog baa laga dooni? Maalin walba siyaasi dantiisa gaar ahaaneed wata ayaa Ummaddan lugooynaya.
Previous articleSiyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur o farmaajo Ku Cadeeyay dambiyada u galay intii Xilka Loo dhiibay, Somaliland,na Fogeeyay
Next articleyaa leh shirkada NEW SILK ENERGY